Ndi Discounting eweda a Brand karịa Free? | Martech Zone
Anyị na-enwe mkparịta ụka dị mma banyere ngosi m na-abịanụ na Social Media Marketing World banyere ụdị onyinye anyị nwere ike inye ndị mmadụ bịara nnọkọ m ma ọ bụ ihe omume ahụ dum. Mkparịta ụka ahụ bịara na ma iwelata ego ma ọ bụ nhọrọ ọ bụla nwere ike iweda ọrụ anyị ga-eweta ala.
Otu n’ime ihe ndị m mụtara bụ na ozugbo e debere ọnụahịa, a na-edozi uru ahụ. Ọ baghị uru ụdị nsonaazụ anyị na-enweta ndị ahịa anyị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị na-alaghachi na ihe anyị do na ihe ha na- na-akwụ anyị ụgwọ ka anyị mee ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-ere ahịa. Yabụ - ọ bụrụ na anyị nyere onye ahịa mbelata ego maka ọrụ izizi anyị nyere, anyị ahụtụbeghị mgbe ha banyere ọrụ nke abụọ maka ọnụahịa zuru ezu. Ọ bụ anyị kpatara… anyị devalued ọrụ anyị site discounting elu n'ihu njikọ aka.
Mwepu ego dị ala na-emebi ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, na-egbochi ikike ụlọ ọrụ ibuli ọnụ ahịa. Rafi Mohammed, HBR Okporo mmiri na ego.
Izu-ụka ole-na-ole gara aga, mụ na enyi m James onye nwere otu na-ekwu maka nke a Pizza nke Indianapolis. Agwara m na ọ ga - akara ya mma karịa iwelata ego. Ndị mmadụ na-atụle nri anaghị akwụ ụgwọ na-amata uru nri bara ebe ndị bịara na coupon na-enye naanị maka azụmahịa - ọ bụghị ogo nri. Kupọns ahụ na-emebi ngwaahịa na ọrụ ka James kwụsị ịme ha.
Ebe ọ bụ na ndị na-azụ ahịa kwenyere na uru nke ngwaahịa nwere ike dakọtara na uru nke ngwaahịa a zụtara, ijikọta ngwaahịa na-akwụghị ụgwọ na ngwaahịa nwere nnukwu ngwaahịa nwere ike ịbawanye nghọta nke uru ya. Mauricio M. Palmeira (Mahadum Monash) na Joydeep Srivastava (Mahadum nke Maryland) site na Kedu mgbe ndị ahịa na-eche na nnwere onwe bara uru karịa ngwaahịa efu?
Nke a bụ ihe mere mbupu n'efu bụ ihe ewu ewu na saịtị ecommmerce. Kama ịdalata ngwaahịa ị na-ere, ị na-enye ihe mgbakwunye - echiche dị mfe maka ndị na-azụ ahịa ka ha ghọta na-enweghị mbibi ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Ihe anyị rụpụtara bụ akụkọ doro anya, n'ezie. Anyị maara na mgbe anyị kwadoro nkwekọrịta anyị, anyị ga-apụrịrị karịa iwelata ego. Ma obu anyi nwere ike ikpebi ma onwere ihe ndi ozo ma obu oru ndi anyi nwere ike igbakwunye. Dịka ọmụmaatụ, ndị ahịa anyị na-enweta akụkọ Google Analytics kwa izu yana kwa ọnwa nke na-etinye GA n'ime ezigbo akụkọ dị mma, nke a na-agụta nke ahụ dị oke mma maka nyocha ndị isi. Mgbe anyị na-akwụ ụgwọ maka ọrụ ahụ, ọ bara uru tinye na anyị ga-eji ọlyụ nyefee ma ọ bụrụhaala na a kwụrụ anyị ụgwọ zuru oke maka ọrụ anyị na-enye.
Maka ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa, achọrọ m ịnwale ikpe n'efu maka mbelata ụbọchị ọ bụla. Kwe ka ndị ahịa nwalee ịkwọ ụgbọ elu gị wee hụ uru ọ bara - ma ha ga-eji ọ theyụ kwụọ ụgwọ maka ọrụ ahụ.
Discount na-ewepu ego? You na-ahụ nsonaazụ dị iche?
Tags: Kupọnsiwedadiscountnwepu ego na n'efufree
Eeh. Ọ dịghị mgbe m na-ego.
Vikas nke asụsụ Avnish
mgbe niile nnukwu ego bụ ihe nke mgbagwoju anya n'elu ịnye ọnụahịa otú ntụkwasị obi belata